Maitiro Ekuvimbisa Saiti Yako Yakasarudzwa kuemail | Martech Zone
Chipiri, February 19, 2008 Chishanu, December 12, 2014 Douglas Karr
Isu tanga tichiongorora imwe yemasaiti evatengi vedu nhasi. Vachave vachienda kune yedu email kubatanidzwa munguva pfupi - chinova chinhu chakanaka. Ndiri kufungidzira mawebhusaiti avo angangodaro akatonyorwa ... heino chikonzero nei…
Ivo vane fomu yekutaurirana pawebhusaiti yavo. Izvo zvakanaka zvakakwana, boka reminda yekutumira yako yega info info kwavari kusaina yavo email email. Kunyatsotarisisa, zvakadaro, uye chiri nyore chingori chishandiso chavakaisa kunze kuti spammers vashandise.
Cherekedza iyo yakavigwa minda kwaunogona kuisa email kero! Seyedzo, ndakadhonza fomu, ndokuisa email kero pairi, ndokuisa chinongedzo mune imwe ndima yakavanda. Ini ndakadzvanya kutumira uye miniti gare gare, ini ndaive neSpAM email muinbox!
Aya ndiwo mashandisiro anoita spammers kutumira email pasina kunetseka nezvekuvharwa. Zvese zvavanofanirwa kuti vaite kutsvaga fomu rakadai pane iri website yako uye ivo vanogona kunyora maitiro ano pusha mamirioni emaimeri kuburikidza nehusiku humwe. Ndiani anovharirwa? Kwete iyo spammer… iyo kambani inoita!
Iyi fomu chaiyo iri pawebhusaiti ye bhiriyoni dhora bhizinesi, kwete bhizinesi diki. Uye kune zviuru zvemhando idzi dzemafomu asina kuchengeteka kwese kwese pamambure. Zvinosemesa apa ndezvekuti vakazviita pane peji yeASP - peji raigona kuve nyore kutarisa kutsvaga kero dzeemail kuseva ndokuvawedzera.
Kana iwe uri kushamisika, hongu isu takavaudza!
Tags: email blacklistEmail Fomuemail fomu kushushikanaspam fomu
Feb 19, 2008 at 11:19 PM
Feb 19, 2008 at 11:35 PM
Kukadzi 19, 2008 na12:49 PM
The best protection is still to stop publishing email addresses, and use a webhu fomu panzvimbo.
Kukadzi 21, 2008 na3:26 PM
Kukadzi 21, 2008 na3:31 PM
Apr 12, 2008 pa 3: 29 AM
Apr 12, 2008 pa 10: 49 AM
Apr 12, 2008 pa 3: 32 AM
Apr 12, 2008 pa 10: 50 AM